Kuyini, yakhiwa kanjani nokuthi yenzeka kuphi iDANA | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Esihlokweni esedlule sasihlaziya ukuthi kuyini nokuthi kunamiphi imiphumela iconsi elibandayo. Sibone njengesiphetho sokuthi umqondo wokwehla okubandayo usetshenziswe kabi yisitatimende sezitatimende eziyiphutha esihambisana naso. Futhi ukuthi umqondo wokwehla okubandayo kungukucindezeleka ngokweqile okuhlukaniswe emazingeni aphezulu. Kuyaziwa kangcono njenge Dana. Lesi yisimo sezulu esenzeka minyaka yonke futhi sibonakala ngezimo zezulu ezingezinhle ezidala ukulimala okuningi.
Kulesi sihloko uzofunda konke ngeDANA. Ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngayo? Kumele uqhubeke ufunde.
1 Yini iDANA
2 Ikhiqizwa kanjani
3 Kukhiqizwa kuphi futhi nini i-DANA
4 Imiphumela ye-DANA
Njengoba kushiwo ku-athikili yokwehla okubandayo, kuyinto ehlasela ngokuphelele uhlangothi lweMedithera lwenhlonhlo yase-Iberia. Kwenzeka njengoba igama lalo liphakamisa ukuthi ukucindezeleka okusemazingeni aphezulu. Umoya wenza ushintsho olukhulu emazingeni engcindezi yasemkhathini futhi enza imvula enamandla engabonakala kulezi zikhathi. Umqondo wokwehla okubandayo ubhekisa kuphela emiphumeleni ebangelwe yilokhu kucindezeleka okuhlukaniswe ngobude futhi sisetshenziswa ngokubambisana ukumemezela ukuthi sizoba nemicimbi eyingozi yemvula.
Kodwa-ke, ochwepheshe kulo mkhakha, ngakho-ke labo abaziyo ukuthi le nto isebenza kanjani, bakhethe igama elithi DANA ukuze bachaze inqubo eqala ngayo.
Ukuze i-DANA yakhe kufanele kube nezinhlobo zezimo ezahlukahlukene ezingaba khona ngalesi sikhathi sonyaka. Ngalesi sizathu, kujwayelekile ukuthi, ngezinsuku eziseduze ne- ihlobo laseSan Martín kunezinsuku lapho kuba khona imvula eyinhlekelele, edala umonakalo omkhulu.
Into yokuqala edingekayo ekwakheni lesi simo sezulu ukuthi umoya we umfudlana wejet uyajikeleza ukuze yakhe izinombolo zasemuva. Kamuva, ukunwetshwa kwemisinga yomoya eningizimu kwakhiwa kubangelwa ukwehla kwengcindezi yasemkhathini. Ingxenye eyedwa yengcindezi ephansi ibonakala njengomphumela wokuhamba komoya ubheke eningizimu.
Njengoba sishilo kwezinye izindatshana ezifana nalezi ze ingcindezi yasemkhathini, indawo yengcindezi ephansi ikhombisa ukuthi umoya uhamba ngakuphi. Imisinga yomoya ihamba ngokwewashi enkabazwe eseningizimu nangakwesobunxele enyakatho nenkabazwe. Lokhu kusakazwa komoya okwenza kube khona ukwakheka kwamafu we uhlobo lweqoqo le-nimbus kuveza iziphepho ezinamandla.
I-DANA ihlukaniswe ngokuphelele nommango owawukuyo futhi iqala ukuya eningizimu. Ngakolunye uhlangothi, ezikhathini eziningi kwenzeka lokho ummango wokucindezela okuphezulu enyakatho yeDANA. Lezi yizimo zezulu ezinhle ezibonakala ngengcindezi ephezulu yasemkhathini. Kulabo abangazi, umqolo uyindawo yomkhathi lapho izingcindezi ziphakeme kakhulu kunezinye izindawo ezizungezile.
Kukhiqizwa kuphi futhi nini i-DANA
Ngokuvamile, i-DANA yenzeka ngenkathi yokuwa. Lokhu kungenxa yomoya osazungeza ezindaweni zasolwandle kusuka ekushiseni kwasehlobo. Isifunda esithambekele kakhulu kulolu hlobo lomcimbi yiMedithera. Kusenhlonhlweni yethu lapho kwenzeka khona ukungqubuzana komoya osezindaweni ezibandayo okuqhubekela phambili kuyo yonke iNtshonalanga Yurophu nangomoya ofudumele noswakeme ovela oLwandle iMedithera.
Ukusuka emifudlaneni yejet, kube yilezi zinqwaba zomoya obandayo oqhamuka e-stratosphere (lapho amazinga okushisa ephansi kakhulu), zisakazeka ngaphezu kwezinkulungwane zamakhilomitha ukuze zibe nobubanzi obukhulu bamakhilomitha angamakhulu. Lokhu kuvulwa okukhulu kuthinta yonke iPeninsuka egcina iba nemvula enamandla enamandla amakhulu cishe kuzo zonke izindawo ngasikhathi sinye.
Isinyathelo esivame kakhulu i-DANA esinaso kungukusakazwa komumo osentshonalanga-mpumalanga, yize kwesinye isikhathi ingaya ngasenyakatho naseningizimu, ibangele ukuthi ubukhulu bomoya bugobeke buze bugqashule. Lapho lokhu kususwa kwenqwaba yomoya kwenzeka, esinye sazo sihlala sizimele kepha sibanda kakhulu futhi sodwa. Lesi yisisindo somoya esizodala lezi zimvula ezinamandla ezinemimoya neziphepho, esikubiza ngokujwayelekile ngokuthi ukubanda okubandayo.
Imiphumela yalesi simo sezulu inkulu kakhulu uma kukhula kakhulu umehluko emazingeni okushisa phakathi kobunzima obubandayo bomoya obuhlukanisiwe nezinga lokushisa lomoya ovela olwandle. Uma ulwandle lufudumele, ubukhulu bomoya buzohwamuka ngokushesha futhi buzojiya lapho bufinyelela ebunzimeni obubandayo, kudale amafu amakhulu futhi kudale imvula enkulu.
Inkinga edalwa yilolu hlobo lwemvula ukuthi amadolobha lapho ewela khona awalungiselwe amanani anjalo wamanzi ngesikhathi esifushane kangaka. Futhi ngukuthi amapayipi endle kanye nenethiwekhi yokusabalalisa amanzi ifinyelela umkhawulo wayo futhi kwenzeka nezikhukhula ezaziwayo.
Imiphumela yale mvula edolobheni elithile ingenxa ye- ukuhlela nokuhlelwa kwendawo. Idolobha ngalinye line-PGOU (Planning Planning and Management Plan) yalo equkethe zonke izici ezidingekayo ukuvimbela umonakalo odalwa yimvula enamandla kakhulu. Isimo sezulu futhi izici zayo zifakiwe ku-PGOU yendawo. Uma, ngokwesibonelo, idolobha lihlangabezana nemiphumela emibi evela ku-DANA minyaka yonke, into ejwayelekile kakhulu ukuthi bazama ukudala noma uku-oda ingqalasizinda edingekayo ukunciphisa umonakalo.
Izikhukhula zidala umonakalo omkhulu wezinto futhi ezinye izimpilo ziyabulawa minyaka yonke ezweni lethu. Iningi labantu ababhajwe ezimotweni, bacwiliswe noma bathathwe yimisinga kanye / noma umfula ugcwala.
Njengoba ukwazi ukubona, ukwehla okubandayo akuyona nje into engumphumela noma igama elijwayelekile elinikezwa lokho kudangala okuzihlukanisayo okwenzeka endaweni ephakeme ebizwa nge-DANA.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » I-DANA, Ukudangala Okuhlukanisiwe Emazingeni Aphezulu